bhimphoto: रञ्जित मन्त्र
चार वर्षीय छोरा लिएर आमा न्युरोडहुँदै कतै गइरहेकी छन् । छोराको आखा पसलको शो-केसमा अडिन्छ । उ भन्छ 'मामु मामु , कस्तो राम्रो हेलिकप्टर । मलाइ चाहियो ।' आमा सुरुमा नसुनेझै गर्छिन् । छोरो टक्क रोकिन्छ । पहिले आग्रह गरेको उसले अब कर गर्न थाल्छ । आमा भन्छिन् 'तँलाइ जे देख्यो त्यही चाहिने ? हुँदैन ।' ब्यागमा करीव ३५० रुपैयाँ छ । आफन्तकोमा पुजामा हिडेकी उनलाई हिसाब थाहा छ, आउँदा-जाँदा ट्याक्सी भाडा तीन सय लागिहाल्छ । ५० ले त्यो खेलौना पक्कै आउने होइन ।
धेरै कर गरेको देखेर उनलाई झर्को लाग्छ । रीस पनि उठ्छ । भन्छिन् 'हेलिकप्टर सेलिकप्टर किन्ने होइन । जाने भए खुरुक हिड । नभए यही छाडेर जान्छु । जोगीले आएर लैजान्छन् । अनि थाहा पाउछस् ।' उनी हात छुटाउँछिन् । विस्तारै केहीअघि बढेजस्तो गर्छिन् । छोरो रुन्छ । अलिपर पुगेकी मामुलाई हेर्छ । अनि खुरर्र दगुरेर मामुको हात समात्छ । उसको मुहार नियाउरो छ । धेरैबेर उ हँसिलो हुन सक्दैन । बालमष्तिस्कमा त्यही रंगीन हेलिकप्टरले फन्को जो मारिरहेको हुन्छ ।
आइ-लेबल : आँखाको बराबरी गरिएन भने खिचेका तस्बिर लो वा हाइ एङ्गल आउँछन् । लो एङ्गलबाट खिचे होचो मान्छे अग्लो कदको देखिन्छ । अग्लो मान्छेको तस्बिर हाइ एङ्गलबाट खिचे होचो आउँछ । बच्चा र आमाको कदबारेमा सोचौ । सानो बालकले उभिएकी आमा लो एङ्गलबाट देख्छ । उनका अनुहारको भावभंगिमा कुनै कार्टुन हेरेजस्तो वा कुनै चलचित्रमा खलपात्रजस्तो । गाली गरेको वा रिसाएका बेला त्यो उसको आइ-लेन्सले आमालाई कस्तो देख्ला ? के सोच्ला ? कुरा ठूलो होइन तर, पक्कै असर सकारात्मक हुन्न । रिसाएकी आमाले उसलाई गाली गरिरहँदा मष्तिस्कलाई एकातिर हेलिकप्टरले तानेको छ । अर्कोतिर छाडेर जान्छिन् की भन्ने डर ।
सकारात्मक दृश्य : कर गर्न थालेको छोरा त्यसै मान्ने भएन । उनी घुँडा मारेर टुक्रुक्क बस्छिन् । छोराको अनुहार ममतामयी पाराले हेर्छिन् । अब छोरा र आमाको कद उत्रै देखिन्छ । छोराले आमाको अनुहार हेर्न कुनै असजिलो छैन । भन्छिन्- 'बाबु, हामी अहिले पुजामा हिडेको । बजार गर्न फेरि आउँला । अहिले मामुले पनि त आफूलाई केही किनेकी छैन नि । किनेकी छ त ?' छोरो नियाउरो मुहारले सुक्क गर्दै भन्छ 'छैन । तर, मलाई त्यो हेलिकप्टर...।' मामु भन्छिन्- 'भरे फेरि सपिङ गर्न आउँला अनि किनौला । अहिले पुजामा पुगेर आउने । अनि पछि बाबुलाई हेलिकप्टर, मामुलाई पनि केही किनौला । मेरो बाबु ज्ञानी छ । कुरा बुझछ है । होकि होइन ?' उ हो भन्ने संकेत टाउको हल्लाएर गर्छ । दुवै अघि बढ्छन् । बालकले केही पर पुगेपछि त्यो हेलिकप्टर बिर्सन्छ । उसको ध्यान अर्थोकमा जान्छ । उसको मुड बिग्रदैन ।
रञ्जीत आचार्यले दिएका सहभागीलाई नै काल्पनिक पात्र परिस्थितिमा कल्पना गर्न लगाएर वा अन्य विश्व प्रसिद्ध रोल मोडलका जीवनीका प्रसङ्गलाई उदाहरण बनाएमध्ये मलाई आमा र तिनको सानो छोराको प्रसङ्ग सम्झनामा रहिरह्यो । गएको शनिवार विराटनगरमा आचार्यसँगको सक्सेस मन्त्रको कक्षामा सहभागी हुन पाएपछि केही सकारात्मक सोच राख्नै उचित भन्ने लागेर आयो । मान्छेको जातै यस्तो । मन छुने प्रसङ्गमा केही त्यस्तै अनुसरणका लागि आफू तयार हुनु उचित हुनु ठीक जस्तो लागिहाल्ने ।
करीव ३५ वर्षका आचार्य राजधानी बसेर आफुले हात हालेका क्षेत्रमा सफलहुँदै आएका युवा हुन् । एक दसकयता उनले आफूलाई सफल बनाएका छन् । आफुले लेखेको गीतबाट कक्षा थालेका उनले एउटा उदाहरण दिए ।
मोटरसाइकलले बटुवालाई ठक्कर दियो । घटना सामान्य थियो । बटुवालाइ केही भएन । तर, यहाँ दुइवटा परिस्थिति हुन्छन् । या बटुवाले त्यो मोटरसाइकलवालाको कठालो समातेर बजायो । झगडा बढयो । दुवैलाई ट्राफीक प्रहरीले लगे । दोष इञ्जिनवालाकै देखाइएपनि दुवैको समयमात्र नाश भएन, मुड पनि बिग्रियो । या बटुवाले भने 'भाइ कसरी चलाउनु भएको । अहिले केही भएको भए । तपाइ र मेरो दिन बलियो रहेछ । अलि ठीकसँग चलाउनुस् ।' मोटरसाइकलवाला उत्रियो । अनि भन्यो 'सरी दाइ सरी । कता लाग्यो ? तपाइलाई ठीक छ ? हिडनुस कहाँ पुग्नु हुन्छ म छाडिदिन्छु ।' झगडा भएन । छुट्टीएका केहीबेरमा दुवैले घटना बिर्सिए । सबैबेला परिस्थिति यस्तै होला भन्ने छैन । तर, तत्कालीन अवस्थाका यी दुइ व्यवहारले फरक परिस्थिति बनाउने पक्कै हो ।
करीव ३५ वर्षका आचार्य प्रिज्म एडभर्टाइजिङका कार्यकारी प्रमुख, नीलवाराही फिल्मसका प्रबन्ध निर्देशक र ब्रीजवाटर एजुकेशन फाउण्डेशनका अध्यक्ष हुन् । उनी जोडिएका वा सम्बद्ध संस्थाको सूची लामो छ ।
उनले दसकअघि सञ्चार मंत्रालयको एउटा प्रसङ्ग सुनाए । कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणअघि मंज्ञालयलाई देखाएर इजाजत लिनुपर्थ्यो । सो उनी गइरहन्थे । त्यहाँका त्यसबेलाका मुख्य टाइपिष्ट हरिदाई सरल थिए । भनेको गरिदिन्थे । एक कप चिया खुवाए पनि खुसी हुन्थे । कागज टाइप गरिदिएर काम छिटो सिध्याउन उनले मद्दत गर्थे । मंत्रालयले एक दिन सबै काम अब कम्प्युटरबाट गरिने भन्दै कर्मचारीलाई त्यो नयाँ भाडो सिक्न आहवान गर्‍यो । टाइपिष्ट अरु अरु सिक्न थाले । अवकाशका केही वर्षमात्रै बाकी रहेका हरि दाइले सिक्न मानेनन् । भन्थे '५५ लागिसकियो, अब म बुढाले क सिकिरहनु । म टाइप नै गरेर बस्छु ।' निकै दिनपछि फेरि पुग्दा टाइपराइटर रहेको कुनाको हरिदाईको टेबल ठाउँमा थिएन । अरु कर्मचारी कम्प्युटरमा काम गरिरहेका थिए । हरि दाई टेबल टेबलमा चिया सर्ब गरिरहेका भेटिए । आचार्यले भने 'समयसँगै चलिएन भने यस्तो हुने रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण मलाई हरि दाइ लाग्छ ।'
गत वर्ष राजधानीमा यस्तै कार्यक्रम गर्दा अपेक्षाभन्दा धेरै सहभागी भएछन् । ३५ आउने भनकोमा ९५ जना आएपछि यस्ता कार्यक्रमलाई उपत्यका बाहिर पनि लैजाने सोच बनाएर यसपटक मेरो जब डटकमले विराटनगर र बुटबलमा पनि एक दिने कार्यक्रम तय गरेपछि सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । मेरो जब डटकमले जब सीकर र अनुभवी कारिन्दा खोज्ने कम्पनीका लागि बीचमा बसेर काम गरिदिने रहेछ । यो साइटका प्रबन्ध निर्देशक शैलेन्द्र गिरीसँग कुरा भयो । उनले बताए 'समय फेरिएको छ । सकारात्मक सोच राख्ने, अरुलाई पनि आफुजस्तै हो भनेर समान व्यवहार गर्नेहरु सफल हुन्छन् । हामीले भन्ने कुरा यही छ ।' विहान बिहान टेलिभिजन च्यानलहरुमा फलाक्ने नाङ्गे वा गेरुवा, पहेला वस्त्रधारी विद्धानले भन्ने कुरा पनि सकारात्मक सोचमै आधारीत रहेको अनुभव हुन्छ । लिनु नलिनु आफ्ना कुरा ।
मैले आचार्यको करीव ६ घण्टे कक्षामा पुरा बिताउन सकिँन । कामले बाहिर निस्कनुपर्ने थियो । तर, जति सुनियो, रमाइलो लाग्यो । गएको होलीमा मित्र यज्ञशले कोसेलीमा लेखेको स्तम्भको एउटा प्रसङ्ग सम्झीए । राजनीतिलाई गाली नगरौ, नेतालाई गाली नगरौ, कारण-धेरै पढेका र क्षमतावानहरु विदेश जान्छन् । जान नसक्ने नसक्ने तर, पढेकाहरु प्राइवेट जागिर रुचाउछन् । तीभन्दा कम क्षमताहरु पनि निजी क्षेत्रमै रमाउँछन् । राजनीति रहलपहलले थामेको छ । फोहर उठाउन तपाइ हामीलाइ मन छैन भने दोष मात्रै किन दिने ?
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:42 PM